वलेवामा हवाई जहाज सरर तीज गीत सार्बजनिक::Online News Portal from State No. 4
वलेवामा हवाई जहाज सरर तीज गीत सार्बजनिक
प्रकाश सपूतले उडाए जहाज !
बागलुङ, ९ साउन – वलेवामा जहाज चल्न थालेपछि यसको प्रचारप्रसार गर्ने काम पनि धमाधम भइरहेको छ । बलेवा क्षेत्रको विकास र प्रबर्धनका लागि पूर्ण परियारको लय शब्द र सीता परियार र पूर्ण परियारको स्वर रहेको वलेवामा हवाई जहाज सरर तीज गीत सार्बजनिक भएको छ। २०७५ सालको तीजको अबसर पारेर गीत सार्बजनिक गरिएको हो। २६ वर्षा पछि पुन संचालमा आएको बलेवा हवाई मैदानको विकास र प्रबर्धनका लागि गीत निर्माण गरिएको निर्देशक परियारले वताए ।
वलेवामा हवाई जहाज सरर तीज गीत पृन्सेस मिडिया मार्फत मंगलवार बजारमा आएको हो । उक्त गीतमा पछिल्लो समय व्यापक रुचाइएका कलाकार प्रकाश सपूतको उत्कृष्ट नृत्य रहेको छ, सपुतलाई स्मृति खवासले साथ दिएकी छिन । एरेन्ज तारानाथ आचार्य, छायांकन गणेश सापकोटा, सम्पादन रमन माली, नृत्य निर्देशन शिव परियार र निर्देशन स्वयं पूर्ण परियारको रहेको छ । बलेवामा हबाइजहाज संचालनमा आए पछि त्यस ठाउका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकिय स्थानको प्रबर्द्धनका लागि तीज गीत तयार गरिएको निर्देशक परियारले जानकारी दिए। उक्त गीतको छायांकन बलेवा, बाग्लुङ र पर्बतमा गरिएको छ ।